Waan guuleysanay! | Martech Zone
Saturday, May 17, 2008 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Bishii Ogosto ee la soo dhaafay waxaan ka qoray aniga shaqo cusub at Wadada. Tani waxay dhib ku ahayd 8 bilood Patronpath laakiin ganacsigu wuu iska caddaynayaa marar badan. Rubucayaga koowaad wuxuu ka weynaa sanadkii hore macaamiisheenuna waxay leeyihiin kobcitaan laba-godle gudaha ah iyagoo adeegsanaya xalalkeena suuq geynta iyo ganacsiga.
Xalay, waan guuleysanay Abaalmarinta Mira Shirkadda Indiana ee Teknolojiyada Macluumaadka Gazelle!
Qaybta ugu adag ee dadaalkayagu waa, illaa iyo hadda, isdhexgalka nidaamyada POS Restaurant. Waxaa jira labo qof oo kaliya oo ka shaqeeya warshadaha kuwaas oo ka faa'iideysanaya tikniyoolajiyadaha cusub - kuwa kale intooda badani wali waxay ku sugan yihiin adduunyo faylal fara badan, Access Databases iyo xitaa FoxPro. Waxaan haynaa qaab-dhismeed aad u wanaagsan oo lagu fulinayo tan oo aan ka duwanayn xalalka intiisa kale waxaanan ku hanweynahay isdhexgalka POS.
Waxaan sidoo kale haysannaa ku dhowaad in badan oo ka mid ah masraxa hirgelinta sida aan ku nool nahay! Taasi waxay iga dhigtay inaan ka shaqeeyo saacadaha dheeraadka ah otomaatigga iyo fududeynta hirgelinta. Waad ku mahadsan tahay wanaag inaan heysano koox weyn oo ku taal Patronpath. Mark Gallo, Madaxweynaha, wuxuu fahamsan yahay warshadaha gudaha iyo dibaddaba. Chad Hankinson waa iibiyaha ugu fiican ee aan abid lashaqeeyo - weligiis ma istaago marka iibku dhammaado - wuxuu sii wadaa inuu kala shaqeeyo macaamiishiisa fulinta iyo wixii ka dambeeya. Shaqaalaheena ugu dambeeyay waa Tammy Heath, Maareeyaha Xisaabaadka, iyo Marty Bird, Agaasimaha Suuqgeynta.
Tammy waa Maamulaha Xisaabaadka cajiibka ah ee daneeya macaamiisheeda. Marty wuxuu ii ahaa ilaah, shaqsiyan, tan iyo markii uu abaabulay oo uu dhisay barnaamijyadeena suuq geynta emailka wuxuuna ka shaqeynayaa hagaajinta howlaheena gudaha iyadoo la hirgalinayo Salesforce oo ay weheliso qalabkeenna hadda jira, Google Apps iyo Xaqiiqda.
Kooxdu halkaas kuma joogsato, sidoo kale. Kristian Andersen iyo Associates na siisay an joogitaan websaydh cabsi leh iyo summad. Oo waxaan sii wadeynaa inaan latalinteena joogtada ah ka helno gudigeena - kuwaas oo u haya meherado sida Autobase, CaafimaadkaX, Bangiga internetka ee ugu horeeya iyo Barnaamijka RICS.
War-Saxaafadeed: Patronpath ayaa ku guuleysatay Abaalmarinta Techpoint MIRA
Tags: raadinta dukaamaysiga deegaankawarbaahintaDooxada Warbaahintamilomilo soo qaadoSilicon ValleyIlaaliyaha Silicon Valleyxiriiriyeyaasha slidesharebilowga usbuuca
Waxaa laga yaabaa inaad furto Fariintan…
Douglas, hambalyo! Waxaan ka shaqeeyay wax POS waana ogahay sida ay u adag tahay sidaa darteed waan ku faraxsanahay abaalmarintan iyo macnaha ay shirkad u leedahay…
Woo-Hoo! Abaal marin aad u wanaagsan oo mudan, Doug. Inaan kugula kulanno NRA waxay ahayd meesha ugu sarreysa maalinta kooxda Kwingo.
Qaarkeen baa abuura waxyaabo been abuur ah; qaarkeen baa abuura waxyaabo Muhiim ah. Waxaad abuurtaa Waxtar Waxtar leh - fiican on ya
Hambalyo! Waxay u egtahay dadaalkaaga runtii inuu mira dhaliyay.
Hambalyo Doug! Waa maxay guul la yaab leh!